Myanmar President fail to answer the questions related to Hate Speeches and Anti-Muslim atrocities | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒီနေ့ပဲ သမ္မတကြီးက ခရီးသွားတယ်၊ ဒီနေ့ပဲ မန္တလေးမှာ ပဋိပက္ခ တားဆီးရေး အဖွဲကို မြို့ပြင်ထုတ်တယ်။ မန္တလေးမှာ ပြဿနာဖြစ်ရင်တော့ ဒီဝန်ကြီးချုပ် တာဝန် မကင်းဘူး
Myanmar Muslims: If Myanmar WantsaDemocracy, It Must Integrate Its Muslim Minority »
ဦးဝင်းအောင်။ ။ ကျနော် ဝင်းအောင်ပါ။ ကျနော်တို့ ညီအကိုမောင်နှမ ၁၂ ယောက်ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်က ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် အနှစ် ၂၀ ကြာတဲ့အခါမှာ တော်တော်များများ ကွယ်လွန်သွားတာ – အခု ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရ ကျနော် မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်ပြီးတော့ လည်ပတ်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာ အသက်မသေ ရှင်ကျန်နေတဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေကို မသေခင်မှာ တွေ့ရတဲ့အတွက် သမ္မတကြီးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အရင် ပြောလိုပါတယ်။ ကျနော် ဗွီအိုအေမှာ ၁၅ နှစ်မလုပ်ခင် မြန်မာ့အသံမှာ အနှစ် ၂၀ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ အင်္ဂလိပ် ကျွန်ခေတ်မှာ မွေးပါတယ်။ ဂျပန်ခေတ်ကိုလည်း ကြုံပါတယ်။ နောက် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်တော့လည်းပဲ ကျနော်တို့ ကွန်မြူနစ် အုပ်စိုးတာတို့-ဘာတို့ ဖြစ်လာတော့ နောက် ကျနော် မြန်မာ့အသံမှာ အနှစ် ၂၀ လုပ်တဲ့အခါမှာ အိမ်စောင့်အစိုးရ- စသဖြင့် ခေတ်အဆက် ဆက် နောက်ဆုံး ခေတ်အဆက်ဆက်ကို ကျနော် ကြုံခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်သတင်းစာဆရာပါ။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ကလောင်ကိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ အဲဒီတော့ကာ ဒီလို မြန်မာပြည်မှာပေါ့လေ- ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် အင်မတန်ကို ဝမ်းသာစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ၊ အခုနက သမ္မတကြီး အမိန့်ရှိသလို ကျနော်တို့က အမြတ်ထုတ်ဖို့၊ Invest လုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် အခုနက ပြောသလို ကျနော့် ညီအကို မောင်နှမအရင်းတွေ အဲဒီမှာ ရှိနေပါမယ်။ အဲဒီတော့ကာ မကြာသေးခင်က ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ အင်မတန် အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေတာက မြန်မာပြည်အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ သိကြတယ်၊ မြင်ကြတယ်ဆိုတာကို မသိရပေမဲ့လို့ ပြည်ပမှာကတော့ သမ္မတကြီးလည်း သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဒီကနေ့ ခေတ်ပေါ် တိုးတက်တဲ့ နည်းပညာတွေအရ သမ္မတကြီးအိမ်မှာ နေ့လည်စာ ဘာတို့စရာနဲ့၊ ဘာဟင်းနဲ့ စားလဲဆိုတာကိုတောင်မှ သိလို့ မြင်လို့ရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဦးဝင်းအောင်။ ။ ဒီလို ဘာသာရေး အကျည်းတန်၊ အရုပ်ဆိုးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ပြင်ပမှာ မြင်နေရတဲ့အတွက်က သမ္မတကြီး ဦးဆောင်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အင်မတန် အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီ မုန်းတီးရေးကို ဖန်တီးနေတဲ့- ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လုပ်နေတာကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရ ဘယ်လိုမှ ဘာကြောင့် အရေးမယူလဲဆိုတာ – ကျနော်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မူဆလင်တစ်ယောက်ပါ။ မွတ်ဆလင်တစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ကျနော် တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် မှာ မွေးတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ဝမ်းနည်းပါတယ်။ နောက် အနှစ် ၅၀ သတင်းသမားတစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ကျနော် အံ့သြမိပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်။ ။ ကျနော် ပြောရမယ်ဆိုရင်တေျာ့နော်တို့ နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်။ တခါ စီးပွားရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်တယ်။ အဲတော့ အောင်မြင်မှုတွေလည်း ကျနော်တို့ အထိုက်အလျောက် ရပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေ ဒါတွေလည်း ကျနော်တို့ တွေ့ရပါတယ်။ အဲတော့ ရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ထပြီးတော့ ဖြစ်ကြတဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လူအုပ်စုတစုနဲ့ တစု မီးရှိုကြ အကြမ်းဖက်ကြနဲ့မှ ကြီးထွားလာတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှာ ဟိုဖက်က ဒေါက်တာ ပါပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒေါက်တာ နဲနဲလေး ဖြေပေးလိုက်ပါ။
He decided to run away because he already knew the question list that is coming>>>သမ္မတဦးသိန်းစိန်။ ။ ကိုသန်းလွင်ထွန်းရေ ကျနော်ကို ခွင့်ပြုပါ။ ကျနော် အစီအစဉ်လေးတခုရှိနေလို့ ။ ကျန်တဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကျနော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
အထက်ပါ အင်တာဗျုးအား burmese.voanews.comမှကူးယူဖေါ်ပြသည်။(မြန်မာမွတ်စလင်မ်မီဒီယာ)
Read this to know HOW the President U Thein Sein Avoid the “Swan Ar Shin” and 969….failing to answer Depayin Massacre and Ant-Indian /Anti Muslim INSTIGATOR issue…
Tags: Aung San Suu Kyi, Barack Obama, Burma, Depayin Massacre, Government, Muslim, Thein Sein, United States
This entry was posted on May 22, 2013 at 7:31 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.